Liigichi hubannoo dubartootaa cimsuun miidhaa irraa baraaraa akka jiru ibse
Ilaalchonni dogoggoraa godaansa, mankaraarsummaafi du’aatii haadholii dahumsaan wal-qabatanii dubartoota miidhaa jiran akka xiqqaataniif hojii hubannoo uumuu hojjetaa tureen bu’aa gaariin argamus ammas hojii xiyyeef­fannaa barbaadu ta’uu Liigiin Dubar­toota Dh.D.U.O. giddu galeessaa beek­sise.
Itti gaafatamtuun wajjira Liigii Dubartoota Dh.D.U.O. giddu galeessaa Ad. Qonjiit Baqqalaa akka jedhanitti, ilaalchonni dhaabbilee fayyaatti yoon dahe firri nabira hinjiru, ogeessonni nama daddarbatu fi ogeessis maaf natuqa jechuun dhaabbilee fayyaarra manatti dahuu filachuun lubbuun isaanii darbaa jira.
Biyyi keenya dirree nageenyaa misoomaa itti hojjetanii jiraachuu danda’an otoo qabduu jechoota miid­hagoo fakkaatan dallaalonni ofiif qofa yaadan dubbataniin shamarran keenya godaansa seeraan alaaf saaxilamuun lubbuu isaanii dhabaa jiru kan jedhan Ad. Qonjiit, ilaalchi kun badhaadhina sobaa gonfachiisee shamarran bar­noota isaanii addaan kutuun biyya Ara­baa deemuun rakkoof saaxilamaa jiru. Maatiinis, ijisaa rakkoo ilaalchaa ka­naan golgamee, qabeenya qabuun hojii asitti uumeefii jiraachisuu otoo danda’uu karaa seeraa alaa maallaqasaatti otoo hin hafiin dhalasaas du’aan dhabaa jira.
Akka Adde Qonjiit, himanitti, Li­igiin Dubartoota Dh.D.U.O. waggoota lamaan darbanitti, rakkoo ilaalchaa fi dandeettii dubartootaa gama kanaan jiru xiqqeessuudhaaf hojiilee hawaas-di­nagdeefi siyaasaa bal’aa hojjetaa tureen, bu’aalee hedduun galmaa’aniiru. Du’a haadholiifi daa’immani hir’isuuf hojii raayyaa dubartootaa ijaarameen hojjeta­maa tureefi leenjiiwwan akka dhaabaatti qophaa’aniin waggoota lamaan darban keessa raawwatamaniin paakeejii eki­steenshinii fayyaa hojiirra oolchuun hu­bannoo argameen baay’inni dubartoota dhaabbilee fayyaatti dahanii dabalaa dhufeera. Tajaajilli dahumsa duraafi dahumsaan boodaas jijjiirama guddaa fidaa jiraatus,ammas, hojiileen itti fufi­insaan hojjetaman akka jiran himan.
Rakkoo ilaalchi dogoggoraa godaan­sa shamarranii fide hir’isuufis keessattuu,
Dubartoonni qabeenya uumamaarratti ijaaramanii hojjetan fayyadamtoota taaneerra jedhan
Godina Hararge Lixaa aanaa Gooroo Guutuu, Araddaa Warjii Jaalalaatti dubartoonni qabeenya uumamaa manca’ee ture deebisanii misoomsuu, kunuunsuu fi eeguun irratti ijaaramanii hojjetaa jiran fayyadamtoota dinagdee ta’uu eegaluusaanii himan.
Itti gaafatamtuun Waajjira Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii aanichaa Ad. Timaaji Abdallaa akka nutti himanitti, bara 2004 tti wayita hojii misooma subara darbe konfiransiifi leenjiin kenna­maa tureera jedhanii, hojiin dubartoota hubachiisuu haa jiraatu malee, guutum­maan guutuutti dhaabuudhaaf hojii ijoo waggoottan lamaan dhufanitti liigichi bal’inaan irratti hojjetudha. Mankara­arsummaa waliinis wal-qabatee, ilaal­cha dogoggoraa qabaniin amantaan waan tuqame fakkeessanii yaaduun jira waan ta’eef dhimma calaalamee bahuu qabudha.
Liigichi waggoota lamaafi walak­kaa darbanitti hojiilee humna liigichaa cimsan kennaa tureera. Humna nama baratee haaraa horachuun rakkoolee naawaas-dinagdeefi siyaasaa miseen­sa isaa cimsu hojjechuun bu’aa gaarii galmeessisuu itti gaafatamtuun kun ib­saniiru.
Liigiin Dubartoota Dh.D.U.O.giddu galeessaa Sadaasaa 1-3/2006 magaa­laa Adaamaatti yaa’ii lammaffaa kan deemsisu yoo ta’u, raawwii hojii wag­goota lamaafi walakkaa qorachuun kal­lattii hojii bara 2006/7 ni kaa’a. Yaa'ichi koree giddu galeessaa,koree hojii raawwachiituu,dura teessuufi dura tees­suu itti aantuu,akkasumas, odiitii wag­goota itti aanan liigicha gaggeessan ni filata jedhamee eegama.